के सँसारमा आणविक अस्त्रको होडवाजी बढ्ला ? – kalikadainik.com
के सँसारमा आणविक अस्त्रको होडवाजी बढ्ला ?
आइतबार, साउन १९, २०७६ | २१:४३:५६ |
समाचार विश्लेषण । जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले गरेको आणविक बम हमला विश्व इतिहासकै खतरनाक घटना हो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिमतिर सन् १९४५ मा दुई लाखभन्दा बढीको ज्यान गएको र त्योभन्दा बढी संख्यामा घाइते भएको घटनापछि सँसारमा आणविक अस्त्रको होडवाजी चलिरह्यो ।
शितयुद्धताका अमेरिका र सोभियत संघबीचको अस्त्र प्रतिष्पर्धाले सँसारभर हतियारको विकास गरियो । कतिपय हतियार ती देशसँग नजिककाहरुलाई विक्री गरियो । हतियारको होडवाजीले खतरनाक रुप लिएपछि सोभियत संघ बिघटन पूर्व विश्वका दुई शक्तिशाली देशहरु अमेरिका र सोभियत संघले सन् १९८७ सन्धी गरे । जसलाई दी इन्टरमिडियट रेन्ज न्युक्लियर फोर्सेस ट्रिटी आइएनएफ नाम दिइयो । सन्धी अनुसार ५०० देखि ५५०० किलोमिटर मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्र र त्यो स्तरको सम्पूर्ण हतियार हटाउने उल्लेख छ ।
सन्धीको पालना गर्दै दुवै देशले २६९२ छाटो र मध्यम दुरी मार हान्न सक्ने हतियार १ जुन सन् १९९१ सम्ममा नष्ट गरे । तर, सन्धीको पालनाबारे विभिन्न समयमा शंका उपशंका भयो । अमेरिकाले रुसले सन्धीको पालना राम्ररी नगरेको आरोप पटक पटक लगायो ।
२ अगष्टमा अमेरिकाले रुसमाथि सन्धी उल्लंघनको आरोपमात्र लगाएन, आफू फिर्ता हुने सम्मको घोषणा गर्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन्धीबाट फिर्ता हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । रुसले हतियारको विकास गरिरहेको अवस्थामा अमेरिकी घोषणा अर्थपूर्ण छ । तर, ट्रम्पले सन्धीबाट फिर्ता हुने घोषणा गरेर रुस र चीनसमेत सहभागी सन्धीको आवश्यकता औल्याए । चीनले ट्रम्पको सन्धीबाट फिर्ता हुने घोषणाको विरोध गरेको छ ।
सन्धीबाट फिर्ता हुने अमेरिकी घोषणा र सन्धी नयाँ तरिकाले गर्ने अमेरिकी योजनाले नयाँ चुनौती थपेको छ । सन्धीबाट फिर्ता हुनु भनेको अमेरिका, रुस र चीन जस्ता शक्तिशाली देशहरुले खतरनाक हतियारको प्रतिष्पर्धा बढाउनु हो । चीनले हजारौं बालिष्टक र क्रुज क्षेप्यास्त्र बनाइसकेको छ । अमेरिकाले चीन र रुस दुवैले मिसाइल बनाइरहेको आरोप लगाइरहेको छ ।
हतियारको होडवाजी चलिरहँदा अमेरिकाले पूर्वी एशियामा मिसाइल तैनाथ गर्न सक्छ । अमेरिकाले हतियार तैनाथ गरेपछि चीन र भारतले पनि खतरनाक हतियारको होडवाजीमा सामेल गराउन सक्छन् । एशियामा अमेरिकाले मिसाइल तैनाथ गर्नु चीन र भारत समेत हतियारको होडवाजीमा सामेल हुनु हो ।
ट्रम्पले रुस र चीन समेतलाई नयाँ आणविक अस्त्रसम्बन्धी सन्धीमा सामेल गराउने भनेपनि चीनले कुनै हालतमा संलग्न हुने भनिसकेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको आइएनएफबाट फिर्ता हुने घोषणाको विरोध गर्दै त्रिपक्षीय सन्धीमा संलग्न नहुने भनाई सार्वजनिक भएको हो । घटनाक्रम यसरी विकास भएको छ कि खतरनाक हतियार बनाउन, बेच्न र सामरिक महत्वका क्षेत्रमा तैनाथ गर्न शक्तिशाली देशहरु सक्रिय हुनेछन् । यसले खतरनाक हतियारको होडवाजी चलेको छ । यो सँसारका लागि सुखद होइन ।